Injiilka oo ku qoran af-soomaali - Page 9 of 29 - Kani waa boga shabakada internetka ee aad ka fahmi Injiilka iyo dhamaan khayrkii aay ku hadleen nebiyadu.
“Qur’aanku waa kitaabkii asalka ahaa – isku luqad, xarfo iyo akhrin. Ma jirto meel loogu talagalay fasiraadda aadanaha ama turjumidda kharriban… Haddii aad ka qaadato… Read More »Qur’aan: Kala duwanaansho ma leh! Xadiisyada maxay sheegayaan?
Suuradda Al-Qadar (Surah 97-Awoodda) waxay sharraxaysaa Habeenka Qadarka markii ugu horreysay ee Qur’aanku soo degay Annagaa soo dajinnay Quraanka Habeenka LaylatulQadarka ah (sharafta leh).Ma taqaanna… Read More »Habeenkii Awooda, Maalintii Sharafta & Ereygii Nabiyada
Suuradda al-Xaqa (Surah 69-Xaqiiqda) waxay sharraxaysaa sida Maalinta Qiyaame u dhici doonto iyadoo la afuufayo Buunka. Marka Suurka la afuufo hal mar.Dhulka iyo Buurahana la… Read More »Malaa’igta Midigta & Bidixda ma caawiyaan Maalinta Qiyaame?